Bụrụ onye Ọkachamara Mgbasa Ọha na Ọha na Social | Martech Zone
Wenezdee, Jenụwarị 1, 2014 Wenezdee, Jenụwarị 1, 2014 Douglas Karr
Achọrọ m ịkekọrịta ozi infographic a n'ihi oke nguzo o nwere n'igosi nka dị mkpa maka ahịa iji nwee ike mezue usoro mgbasa ozi mgbasa ozi nke ọma. N'uche m, agaghị m enye nwa akwụkwọ ma ọ bụ ọkachamara ọ bụla ndụmọdụ ka ọ gaa ụzọ nke ịbụ onye maara nke ọma na mgbasa ozi mmekọrịta. Mgbasa mgbasa ozi bụ otu ụzọ nke usoro mgbasa ozi zuru ezu. Kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ ịghọ Ọkachamara Azụmaahịa na nka ndị a - yana ịghọta otu o si dabaa na atụmatụ ụlọ ahịa zuru oke nke ụlọ ọrụ.
Ndị ọchụnta ego na-arịwanye elu na mgbasa ozi mmekọrịta iji bulie ngwaahịa ha site na isoro ndị na-ege ntị na -ekọrịta ihe na ịkekọrịta ọdịnaya nke na-akụzi, na-atọ ụtọ, ma na-enye ihe ọmụma. Ma ọ dịtụla mgbe ị na-eche onye n'azụ akụkọ ndị ahụ na ụwa ọhụrụ a nwere obi ike nke mgbasa ozi mgbasa ozi ọha mmadụ? Ihe omuma nke di n'okpuru ga-eleba anya na ndi ahia ahia ahia n’azu nkpuchi nke uwa a, uzo ndi puru iche na oru ahia na mgbasa ozi ndi mmadu, na ihe omuma nke uwa nwere ike buru ndi ahia ahia a. Infographic site na Lọ akwụkwọ.com
Tags: Educationụlọ akwụkwọụlọ akwụkwọ.comonye mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozionye mgbasa ozi ahịa na-elekọta mmadụ
Daalụ, Douglas, maka mpempe akwụkwọ a bara uru. Ọ bụ ihe ncheta na-enye aka maka ole akụkụ ole enwere maka usoro mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze, ma ọ bụghị naanị ịzụ ahịa n'ozuzu ụbọchị ndị a.